Iincwadi eziGqwesileyo zaBantwana ezipapashwe kwii-1960s - Malunga Incwadi Zabantwana
Iincwadi eziGqwesileyo zaBantwana ezipapashwe kwii-1960s
Iincwadi zabantwana ezaziwa kakhulu ezipapashwe kwii-1960s zazisa abantwana kubalinganiswa abatsha abonwabisayo, iziganeko zembali, kunye namabali azokuma kuvavanyo lwexesha. Ukusuka kwimizekeliso ukuya kubungqongqo bezinye zezifundo abazenzileyo, uninzi lweencwadi ezilungileyo ze-1960s zikwazile ukubhengeza izinto zeli xesha ngelixa zazisa imixholo engapheliyo.
Iincwadi zeMifanekiso eziBalaseleyo ezipapashwe kwii-1960s
Ezinye zeencwadi zemifanekiso ezibalaseleyo ze-1960s ziya kuqhelana nabantu abadala, abadala kunye nabantwana abancinci namhlanje. Uninzi lwezi ncwadi ziye zathengisa kakhulu amashumi eminyaka kwaye zabhalwa ngababhali babantwana abadumileyo.
Iincwadi ezi-9 eziQokelelekileyo zokuQokelela iiNkozo zabaQala
Ezona ncwadi zaBantwana ziBalaseleyo
Umbhali / Umzobi uDon Freeman wadala omnye wabalinganiswa beed teddy bear kwincwadi yakhe yowe-1968 Corduroy . Kwibali ibhere elinomtsalane elilahlekileyo liphulukana neqhosha kwimpahla yalo kwaye liye kwivenkile yesebe ukuyifumana ukuze ithandwe ngumntwana. Abafundi Digest Uqulunqe uluhlu lweeNcwadi zaBantwana eziBalaseleyo eziye zabhalwa kwaye zafakwa Corduroy njengokhetho oluphezulu. UFreeman wabhala ezinye ezininzi Iincwadi eziqukethe uCorduroy kunye neminyaka engama-50 emva kokupapashwa kwayo kwasekuqaleni, umdlali weqonga uViola Davis wabhala incwadi entsha ngomlinganiswa obizwa ngokuba UCorduroy uthatha isaphetha .
Usuku lwekhephu Ngu-Ezra Jack Keats ulandela uPetros njengoko ejonga umhlaba omngqongileyo ngemini yekhephu. Ngelixa ibali kunye nemifanekiso bonwabisa abantwana kwaye baphumelela iMedali kaCaldecott ngo-1963, okona kubaluleke nangakumbi kukuma kwayo njengenye yeencwadi zabantwana zokuqala ukubonisa Umntu ophambili wase-Afrika-waseMelika , Ukutshintsha indlela abantwana abazijonga ngayo iincwadi nezijonga iziqu zabo. Ixesha leMagazini liluhlu eli bali kwiincwadi zabo ezi-100 eziBalaseleyo zaBantwana ngalo lonke ixesha.
Umthi Onikelayo nguShel Silverstein ubhiyozele ngaphezulu kweminyaka engama-50 njengo Eyona ncwadi ithengwa kakhulu kubantwana nakubantu abadala. Incwadi ibalisa ibali lenkwenkwe kunye nomthi awuthandayo njengoko zikhula kwaye zitshintsha. Umyalezo wokupha nothando ubonakalisa isimo sengqondo sabaninzi ngee-1960s, ngelixa isicatshulwa sayo esilula kunye nemizekeliso zisenza kube lula ukuba abantwana bafunde kwaye bonwabele. Ixesha leMagazini, i-USA namhlanje, kunye noMshicileli weveki yonke uluhlu Umthi Onikelayo kuluhlu lwabantwana babo oluphezulu.
Iincwadi zeSahluko eziGqwesileyo ezipapashwe kwii-1960s
Iincwadi zezahluko ezilungileyo kakhulu zee-1960 zizisa abantwana kwiintlobo ezahlukeneyo, ezivela kwi-science fiction kaMadeleine L'Engle kwiimbali zembali zikaIrene Hunt. Babandakanya neenoveli ngababhali abaye baba ziintandokazi zabantwana kunye nabantu abadala abancinci, abanjengoBeverly Cleary kunye noRoald Dahl kwaye uninzi lwabo baphumelele Imbasa yeNewberry okanye iMbeko .
Ukuba Likhoboka , nguJulius Lester, isenokungabi yenye yeencwadi zabantwana ezidumileyo, kodwa isamile ngenxa yomxholo wayo. Le ncwadi ibonise iingxelo zamakhoboka okwenyani adityaniswe nemizobo kunye nombhalo owongezelelweyo ukunceda abantwana bafumane ukuqonda kobukhoboka. Iphumelele Ibhaso likaLewis Carroll Shelf Kwaye waphumelela iNewberry Honor ka-1969.
Umbimbi wexesha , nguMadeleine L'Engle, wanceda ekwenzeni ukuba iintsomi zifikeleleke ngakumbi ebantwaneni. Le ncwadi ilandela usapho lakwaMurry, ngakumbi intombi, uMeg, njengoko bekhangela utata kaMeg owanyamalala ngelixa besebenza ne-tesseracts (imibimbi ngexesha). Iphumelele iMedbery Medal ngo-1963 kwaye yeyokuqala kwiThe Time Quintet. Kwi-2018 incwadi yajikwa yangumfanekiso oshukumayo ophambili.
UCharlie kunye noMzi-mveliso weTshokholethi
Ntanda Umbhali Roald Dahl uzise ubomi kumnandi wonke umntwana UCharlie kunye noMzi-mveliso weTshokholethi , lupapashwe ngo-1964. Usapho lukaCharlies luhlwempuzekile, kodwa loo nto ayimnqandi ekubeni aphumelele ithuba lokuphila ubomi bokutyelela indawo efihlakeleyo yomzi-mveliso wetshokholethi kaWilly Wonka Uluhlu lweBBC lolu njengenye yeencwadi ezinkulu zabantwana . Inkqubo ye- Incwadi iguqulwe yenziwa iimovie ezimbini , enye inomdla weqonga elidumileyo uGene Wilder kunye nomnye umdlali weqonga odumileyo uJohnny Depp.
Imouse kunye nesithuthuthu
Imouse kunye nesithuthuthu NguBeverly Cleary ubalisa ibali likaRalph, imouse ihlala ifuna ukonwabisa. Eli bali limnandi labizwa ngokuba yi-ALA Encwadini eNqabileyo, idweliswe njengenye ye Ijenali yeLayibrari yeSikolo Iinoveli ezili-100 zaBantwana eziPhezulu, kwaye yaphefumlela nefilimu emfutshane. UCleary wazuza iMbasa yeLifa leMveli yaBantwana ngo-1975 ngegalelo lakhe ekubhaleni abantwana.
Ngaba naye ucinga ngam
Ishicilelwe ngo-1967, Umdlalo wase-Egypt nguZilpha Keatley Snyder wazisa imfihlakalo yanamhlanje ebantwaneni. UApril Hall kunye noMelanie Ross baba ngabahlobo ngothando lwabo ekwabelwana ngalo lokucinga kunye nembali yakudala yase-Egypt kwaye benza iklabhu apho badlulisela khona ilizwe elilahliweyo kwilizwe lakudala lase-Egypt. Incwadi yaphumelela ibhaso leNewbery Honor ngo-1968.
Abangaphandle ngu-SE. UHinton wapapashwa ngo-1967 kwaye wachaza isizukulwana senguquko kunye nemvukelo, wazisa abantwana kwiqela lemigulukudu eliphikisanayo, iiGrisi kunye neeSocs. Namhlanje, incwadi ebizwe ngokuba yi-ALA yeNcwadi eNcinci yaBantu abaDala yaBadala kwaye uninzi amanye amabhaso , incede amakhwenkwe angene ekufundeni kwaye afundise izifundo 'zangaphandle' ngobomi. Incwadi yaguqulwa yaba yifilimu kunye nomdlalo weTV.
Isiqithi seBlue Dolphins
Isiqithi seBlue Dolphins , NguScott O'Dell, ubalisa ibali elikhuthazayo nelinika amandla lentombazana eyayixakekile kwisiqithi esikunxweme lwaseCalifornia kwaye kwafuneka ifunde ukusinda. Incwadi iphumelele amabhaso amaninzi Kubandakanywa iMedali yeNberber ngo-1961, kwathiwa yenye yeencwadi zeNcwadi zeLayibrari yeSikolo ezenza i-Century, kwaye yaguqulwa yaba yifilimu enkulu.
Indoda yeJazz NguMary Hays Weik ubalisa ibali likaZeke oneminyaka esithoba ubudala, inkwenkwe ephila ubomi obunzima eHarlem. UZeke ufumana intuthuzelo kumculo odlalwa yiNdoda yeJazz ekhukulisa ngaphaya kwenkundla. Incwadi iphumelele i-Newbery Award ngo-1967 kwaye iye yaba sisiseko kwizikolo ezininzi zaseprayimari neziphakathi, ngakumbi abo bakhonza umvuzo ophantsi okanye abafundi abahlukeneyo.
Ngaphakathi ezintlanu iiAprili
Yapapashwa ngo-1964, Ngaphakathi ezintlanu iiAprili nguIrene Hunt yenzeka ngexesha leMfazwe yamakhaya. Incwadana ephumelele imbasa yeNewbery iye yanconywa ngokuchaneka ngokwembali njengoko ilandela usapho lakwaCreighton kunye nomzabalazo wabo wokuphila ngexesha lemfazwe. Yapapashwa ngexesha leMfazwe yaseVietnam kwaye uninzi lootitshala benza uthelekiso phakathi kwamabali abo babandakanyeka kwiimfazwe zombini.
Iqakamba kwi Times Square
Iqakamba kwi Times Square nguGeorge Selden yapapashwa ngo-1960 yaza yabizwa ngokuba yiNewbery Honor Book ngo-1961. UChester, iqakamba owayesuka eConnecticut, uzibona sele ekwisiXeko saseNew York, apho kufuneka enze khona abahlobo kwaye afunde indlela yokuphila kwisixeko esikhulu.
Iincwadi eziGqwesileyo zikaGqirha Seuss ezipapashwe kwii-1960s
Ngo-1980 umbhali u-Theodor Seuss Geisel, waziwa kakhulu ngegama lakhe lokubhala UGqirha Seuss , wamkela IBhaso leLifa leMveli labantwana inikwe umbhali okanye umzobi obonise igalelo elibonakalayo kuncwadi lwabantwana. Zininzi iincwadi ezaziwayo zikaGqirha Seuss, kodwa ezi zezona zibalaseleyo kwii-1960s kwaye zonke ziyafumaneka kuma-50 aphezulu Iimpapasho zeVeki zaBantwana eziThengisa ngeVeki yeVeki yeVeki yeVeki uluhlu.
Amaqanda aluhlaza kunye noHam
Amaqanda aluhlaza kunye noHam NguGqr.Seuss ucatshulwe ngabantwana ngaphezulu kweminyaka engama-50 kwaye uye waba yincwadi yemifanekiso ethengiswa kakhulu nguGqirha Seuss. Kubhalwe ukubheja , le ncwadi ibalisa ibali lika-Sam-I-Am njengoko ezama ukweyisela umlinganiswa ongenagama ukuba atye amaqanda aluhlaza kunye no-ham, esebenzisa amagama angaphantsi kwama-50 ahlukeneyo. Yincwadi kaGqr.Seuss kuphela epapashwe kwii-1960s ukwenza i-25 ephezulu Ijenali yeLayibrari yeSikolo ePhambili yeeNcwadi eziMifanekiso eziyi-100 .
Intlanzi enye, iintlanzi ezimbini, intlanzi ebomvu, intlanzi eblue
Ukuhlala kwinombolo 13 kuLuhlu lweVeki loMshicileli, Intlanzi enye, iintlanzi ezimbini, intlanzi ebomvu, intlanzi eblue yashicilelwa ngo-1960 yiRandom House. UJay noKay babonisa abafundi zonke izilwanyana zasekhaya ezinqabileyo kunye nezilwanyana abazaziyo kule ngoma incwadi yokuqala Iyafumaneka kwincwadi yebhodi, eluqweqwe oluqinileyo, nakwiifomathi ze-ebook namhlanje. Abantwana abazithandayo ezi ntlanzi zimnandi banokukhwela a Nye Iintlanzi, iintlanzi ezimbini, intlanzi ebomvu, intlanzi eblue ukukhwela umxholo kwi-Universal Studios i-Orlando Islands ye-Adventure theme park Seuss icandelo lokufika .
zithetha ntoni iisimboli zesiporho
Hop kwiPop: Eyona Seuss ilula yoSetyenziso oluMncinci
Hop kwiPop yingqokelela yemibongo emifutshane kaGqirha Seuss eyapapashwa ngo-1963 kwaye yayenzelwe ukunceda abantwana abanezandi ezisisiseko. Ngokusekwe kwintengiso yasekhaya, le ncwadi iqalayo ye-zany ihlalela kwinombolo ye-16 kuluhlu lwabathengisi abathethayo beVeki ngeVeki. Owayesakuba liNkosikazi yokuqala, ULaura Bush , zidwelisiwe Hop kwiPop njengenye yeencwadi zakhe azithandayo zokufunda ngengubo okanye zokufunda ngaphambi kokuba alale kubantwana abancinci.
UGqr.Seuss's ABC: Incwadi eNobumba emangalisayo
Yapapashwa ngo-1963, UGqirha Seuss weABC Incwadi iyafana ne Hop kwiPop , Ngaphandle kokuba yazisa oonobumba endaweni yezandi. Izinja ezimbini zisebenza njengabalinganiswa abaphambili kwaye zazisa abafundi kwizidalwa ezahlukeneyo ezinamagama aqala ngonobumba ngamnye woonobumba. Le ncwadi ilula ikwindawo yeshumi elinesibhozo kuluhlu lwabapapashi beVeki Abona bathengisa kakhulu kubantwana kwaye unako thenga incwadi yebhodi zilungele abantwana neentsana. Abafundi abancinci banokuthenga izinto ezisebenzisanayo Uhlelo lukaGqr Seuss luka-ABC , ophumelele uMvuzo oGqwesileyo waMzali.
Iincwadi ezigqwesileyo zikaEric Carle ezipapashwe kwii-1960s
U-Eric Carle wayengumamkeli ka-2003 kwi-Children's Literature Legacy Award. Umsebenzi wakhe uyathandwa kangangokuba unemyuziyam yakhe eMassachusetts ebizwa Imyuziyam yase-Eric Carle yoBugcisa beNcwadi yemifanekiso . Umsebenzi wakhe weminyaka emininzi waqala ngee-1960s xa wayebonisa incwadi edumileyo ngoku nguBill Martin, Omnci.
Ibrown Bear, Brown Bear, Ubona ntoni?
Ibhalwe nguBill Martin, Omnci., Yeyona ncwadi yakudala Ibrown Bear, Brown Bear, Ubona ntoni? yaboniswa ngu-Eric Carle yaza yapapashwa ngo-1967 Ibhere eBrown kwinombolo 8 kuluhlu lwabo Iincwadi ezili-10 zaBantwana eziBalaseleyo . Incwadi yazisa abafundi abancinci ngemibala eyahlukeneyo kunye nezidalwa njengoko ufumanisa oko isilwanyana ngasinye okanye umntu ngamnye akubonayo. Zintathu izinto ezikhutshwayo ezenziweyo ezenziwe nguMartin noCarle Polar Bear, Polar Bear, Uva ntoni? , IPanda Bear, iPanda Bear, Ubona ntoni? , kunye Baby Bear, Baby Bear, Ubona ntoni?
Umbungu olambile kakhulu
Umbungu olambile kakhulu , nguEric Carle, uye waba sisiseko kwizikolo zamabanga aphantsi. Le ncwadi ayifundisi abantwana kuphela ngendlela umbungu ojika ngayo abe libhabhathane, ikwayonwabisa ngemifanekiso yayo enemibala, kunye nesifundo malunga nokutya kakhulu. Ishicilelwe ngo-1969, incwadi yeklasikhi ihleli kwinombolo yama-20 kuLuhlu lwabathengisi abaphambili beVeki, linombolo yesi-8 Iincwadi zaBantwana eziThengisa kakhulu eAmazon , kwaye yadweliswa kwinombolo yesi-2 nge Ijenali yeeNcwadi eziPhambili zeBhodi yeThala leeNcwadi.
Iincwadi ezigqwesileyo zikaMaurice Sendak ezipapashwe kwii-1960s
Umbhali wabantwana abathandekayo uMaurice Sendak uphumelele UHans Christian Andersen IBhaso loMzekeliso Ngo-1970, iBhaso lokuFunda uLwazi lwaBantwana ngo-1983, kunye nencwadi yakhe edumileyo Apho Izinto Zasendle Zikhona wamfumana imbasa yeCaldecott ngo-1964.
Apho Izinto Zasendle Zikhona
Apho Izinto Zasendle Zikhona NguMaurice Sendak inokuba yenye yeencwadi zabantwana ezibalaseleyo eziza kuphuma ngeminyaka yoo-1960. Ayiphumelelanga kuphela Imbasa yeCaldecott Ngo-1964, yaphefumlela imovie eshukumayo kunye ne-opera. Kumashumi eminyaka, abantwana beza kunxibelelana nomlinganiswa ophambili, uMax, njengoko esiya kwilizwe lamaphupha ukuze abe ngukumkani wezinto zasendle emva kokuba ethunyelwe ebhedini ngaphandle kwesidlo sangokuhlwa. Incwadi yemifanekiso yeklasikhi ikuluhlu lwezona zininzi zeencwadi zabantwana kubandakanya i-USA yanamhlanje yeeNcwadi ezi-10 eziThengisa kakhulu zaBantwana kunye Ixesha leMagazini I-100 yeencwadi zaBantwana eziBalaseleyo zexesha lonke .
Ukwanga i-Bear encinci
Ukwanga i-Bear encinci nguElse Holmelund Minarik ukwabonisa nemifanekiso yomzobi ophumelele amabhaso uMaurice Sendak. Isibhalo ekulula ukusifunda senza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo kubafundi bokuqala kwaye babizwa ngokuba yenye ye Iindaba zeNew York Times Iincwadi zaBantwana eziBonisiweyo eziBalaseleyo zoNyaka ngo-1968. Inxalenye enkulu Bhele elincinci uthotho, incwadi ibalisa ibali leBhele encinci, umakhulu wakhe, kunye nokudideka okubangela ukuba umakhulu wakhe azame ukumthuma.
UMnumzana uMvundla kunye noLonwabo ngoku
Umbhali uCharlotte Zolotow wabhala UMnumzana uMvundla kunye noLonwabo ngoku eyaboniswa nguMaurice Sendak yaza yapapashwa ngo-1962. Eli bali lihle ngomvundla kunye nentombazana encinci esebenza kunye ukufumana isipho esigqibeleleyo kumama wakhe waphumelela imbeko kaCaldecott ngo-1963.
Iincwadi ezigqwesileyo zikaLeo Lionni ezipapashwe kwii-1960s
Ngelixa Leo Lionni isenokungabi ligama lekhaya, uzuze indawo ecaleni kwabo bonke abanye ababhali / ababonisi beli xesha. NgamaCaldecott amane ahloniphekileyo phantsi kwebhanti lakhe, u-Lionni wathola ezintathu ngo-1960 kuphela. Wayephumelele kwi-American Institute of Graphic Arts Medal ye-1984.
Idada ibiyi Imbasa yeCaldecott Imbeko Incwadi kunye ne-ALA Book Notable ngo-1964. Ngelixa le ncwadi igxile kwiSwimmy, ekuphela kwentlanzi emnyama esikolweni seentlanzi ezibomvu, umyalezo ofihlakeleyo umalunga namaqela abantu behlangene, befunda ukwamkela iyantlukwano kwaye boyise iingozi njengenye, uninzi Iintshukumo zentlalo ngee-1960s.
UFrederick NguLeo Lionni yazisa abantwana kwimouse ethandekayo echitha ixesha layo iphupha ngelixa ezinye iimpuku zichitha ixesha lokuqokelela ukutya ebusika. Le ncwadi, eyayiyi Imbasa yeCaldecott incwadi ebekekileyo ngo-1968, yaxoxa ngemiba ebalulekileyo yefilosofi nezopolitiko ngelo xesha, njengexabiso lomsebenzi kunye neengcinga zobusoshiyali kunye nokudibana.
Eyona P.D. Iincwadi zase-Eastman ezipapashwe kwii-1960s
UPhilip Dey Eastman, ubhala phantsi kwegama P.D. Eastman , wayengumntu asebenza naye uTheodor Geisel, okwabizwa ngokuba nguGqirha Seuss. Uninzi lweencwadi zakhe zinombhalo ofanayo kunye nesitayile esibonisa uGqr Seuss, kodwa zahlukile. Ngelixa u-Eastman engakhange abhale iincwadi ezininzi zabantwana njengomnye umbhali / ababonisi ababalaseleyo kwiminyaka yama-1960, ezimbalwa zeencwadi zakhe zafumana udumo oluthe lwadlula amashumi eminyaka.
Hamba, Inja, Hamba!
Funda konke malunga nokuphoswa kweepokotho zasendle kunye nemibala yeekhathuni kwi Hamba, Inja, Hamba! Le ncwadi yaQalayo yahlelwa nguGqr.Seuss imihlaba kunombolo 34 kuLuhlu lweeNcwadi zabantwana ezithengiswa kakhulu evekini kwaye iphumle kwiNcwadi yeMifanekiso eyi-100 yeThala leeNcwadi. Zombini incwadi zebhodi kunye neenguqulelo zencwadi ezisemgangathweni ziguqulelwe kwiSpanish.
Ngaba Ungumama Wam?
Ukuba ungumzali okanye utitshala, amathuba okuba ufunde Ngaba Ungumama Wam? , eyapapashwa ngo-1960. Kweli bali libalaseleyo, usana lweentaka lusondela kwiqela lezilwanyana ezahlukeneyo ngelizama ukufumana unina. Iveki yoMpapashi yeeveki le ncwadi emnandi kwinombolo 24 kuluhlu lwabo lweencwadi ezithengisa kakhulu zabantwana ngalo lonke ixesha.
Iincwadi zaBantwana abaDala ezivela kwii-1960s
Yintoni eyenza ukuba iincwadi zabantwana zibalasele sisakhono sabo sokudlula ixesha lokunxibelelana nabantwana kwizizukulwana ezininzi. Uninzi lwezi ncwadi zithandwa kakhulu zabantwana ukusukela ngeminyaka yoo-1960s ziyaqhubeka nokufumana indawo kumagumbi okufundela, kumathala eencwadi, nakwiishelufa zeencwadi zabantwana namhlanje. Uninzi lufumene amaqweqwe ahlaziyiweyo kunye neenkcazo ukubhenela kubaphulaphuli banamhlanje, kodwa abalinganiswa, amabali, kunye nemifanekiso ihlala injalo, isalawula ukufikelela kubantwana njengoko benzayo nge-1960s.
Yonke Malunga Bollywood Ubucwebe Begolide Ukulala Ukuphefumla Iingubo Zokuhlamba Iimpahla Izibonelelo Zokujonga
imibongo yothando kuye umgama omde
inja ichume nini
ukuba uthumele ntoni umntu endaweni yeentyatyambo
igama kwizenzo kodwa hayi kubambiso
susa amanqaku e-scuff kumgangatho weenkuni